EMMA ELISE KAMGANG, Onye edemede na TELES RELAY
Okwu Ernest Obama: "Amougou Belinga aghaghi ịbụ onye obi tara mmiri na onye anaghị agbanwe agbanwe", chere ...
O kwenyere na ọ bụ naanị n'ụzọ a ka onye ọchụnta ego nwere ike isi chebe ụlọ ọrụ ya pụọ ​​na mbọ ọjọọ. Mmeghachi omume na-aba ụba na isiokwu nke njide nke ...
Ichoro imuta otu esi esi egwu nwanyi n’elu akwa? nke a bụ ebe na otu esi elekwasị anya na uche gị mgbe ị na-enwe mmekọahụ, iji were onye gị na ya nwee eluigwe nke asaa na gafere. ihe onyonyo 1…
Paris La Défense Arena: “Reprogramming Celine Dion ma ọ bụ Iron Maiden bụ egwuregwu nke skittles…
AJTERJ "AKA:“ Anyị bụ ndị mbụ ejidere ma anyị bụ ndị ikpeazụ ikpughere, ”Bathilde Lorenzetti, osote onye isi ala nke Paris La Défense Arena na-ekwu. Kemgbe Machị 7, ọdịghị ihe omume emere na ụlọ Hauts-de-Seine ...
E. Obama: gbadata na hel nke nwatakiri e mebiworo emebi.
Nchụpụ nke Ernest Obama site na ọkwa dị egwu nke onye nchịkwa nchịkwa nke ụlọ ọrụ telivishọn nke onwe, ọhụụ 4, na-aga n'ihu na-eri nri na mgbasa ozi mgbasa ozi. Onweghi ihe sere onyinyo ọnọdụ a pụrụiche na June 18 n'isi ụlọ ọrụ ...
Amougou Belinga jụrụ ịgbaghara Ernest Obama
Cameroonian ozi ọma si n'aka nke CEO nke L'Anecdote otu Jean-Pierre Amougou Belinga bu n'obi ịga n'ihu na usoro iwu, nke ọ malitere ugbu a megide ya…
Cameroon - Ernest Obama ikpe: "dinosaurs nke ọhụụ 4" kpọgidere Ernest ...
Mondaybọchị Mọnde a, June 22, 2020 na setịpụrụ ihe omume a, bụbu onye isi njikwa nke ọhụụ 4 ọhụụ ka o rie. Isi nke onye isi CEO nke Vision4, Ernest Obama, na-aga n'ihu na ikuku ...
Trump binye aka na mgbanwe ndị uwe ojii
N'ihe banyere ngagharị iwe akụkọ ihe mere eme nke sochiri ọnwụ nke African-American George Floyd, Donald Trump bịanyere aka na iwu na Tuesday iji gbochie obi ọjọọ ndị uwe ojii. Ndi ochichi onye kwuo uche ya na ndi oru ndi choro ...
Coronavirus: China na - achọpụta ikpe ọhụrụ nke Covid-19 na mpaghara Beijing
China, ebe Covid-19 pụtara na njedebe nke 2019, ahụwo nlọghachi na ọnụ ọgụgụ nke mmetọ na ụbọchị ndị a, gbadoro anya na nnukwu ahịa nke Xinfadi, na ndịda nke isi obodo ahụ. Ihe dị ka otu narị ọhụụ bụ ...
Njem Nleta: Mgbasa iji weghachi mpaghara nsogbu mpaghara
Iji kwado ndị njem metụtara njem, ike gwụrụ kemgbe mmalite nke nsogbu ahụike, E gosipụtara mpaghara ahụ, Mọnde, June 15, 2020, mgbasa ozi nkwukọrịta ọhụrụ ya iji kwalite ókèala ya. Anyị kwesịrị ịchekwaa ...
Kedu onye na-eme ihe nkiri Vanessa Paradis ka ọ nọchiri n'ụmụ nwanyị Underskirts?
W9 na-agbasa ọchị na-atọ ọchị "Sous Les Skirts des Filles" na mgbede a na 21: 05 pm na Vanessa Paradis, bụ onye dochiri onye na-eme ihe nkiri ọzọ na ọkwa dị mkpirikpi. Omee hụrụ na Nso na Nnabata, Audrey Dana na-aga n'azụ igwefoto na 2014…